Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Misaron-tava sa tsy hisaron-tava? Fanontaniana izay mangataka fanontaniana bebe kokoa
Misaron-tava sa tsy hisaron-tava?
Noho ny torolàlana vaovao avy amin'ny Centres for Disease Control and Prevention (CDC) momba ny fanaovana sarontava tarehy, toerana maro no manova ny politikany ho an'ireo vahininy.
Ny CDC dia nanambara fa ny olona vita vaksiny tanteraka dia tsy mila manao sarontava na manao fanazaran-tena any anaty trano na any ivelany.
Izany dia miteraka ny fanontaniana - misaron-tava na tsia hisaron-tava, fa miankina amin'ny olona angatahinao ny valiny.
Ireo fanontaniana tsy voavaly ireo dia azo antoka fa hiteraka tranga mety ho voampanga mety hametaka ny pejin'ny media sosialy.
Tamin'ny Alakamisy, nanambara ny CDC fa ny olona vita vaksiny tanteraka dia tsy mila manao sarontava na manao fanazaran-tena any anaty trano na any ivelany (ankoatr'izay misy maningana). Ity fanambarana ity dia namorona politika vaovao marobe ho an'ny orinasa tsy miankina.
Ny misaron-tava na tsy misaron-tava no fanontaniana anio, fa ny valiny dia miankina amin'ny olona anontanianao. Mampametra-panontaniana ihany koa, raha tsy takiana amin'ireo mpanjifa vita vaksiny tanteraka ny saron-tarehy, midika ve izany fa azo antoka ny mieritreritra fa misy mahita mandehandeha tsy misy saron-tava efa vita vaksiny tanteraka? Sa tsy maintsy hitondra karatra fanaovana vaksiny hanaporofoana ny maha-vaksiny antsika isika?
Ireo fanontaniana tsy voavaly ireo dia azo antoka fa hiteraka tranga mety ho voampanga mety hametaka ny pejin'ny media sosialy. Mandra-pahatongan'izany dia andao jerena ny fiovan'ny politikan'ny sarontava tato anatin'ny roa andro.
Manomboka amin'ny Trader Joes izahay, satria toa mamaly ny fanontaniana izany - raha tsy fiarovana saron-tava no azo antoka ho an'ny olona vita vaksiny feno, ary raha heverina fa vita vaksiny tanteraka ny mpiasany, maninona no takiana izy ireo mba hisaron-tava?
Ity faribolana fanontaniana ity dia tsy isalasalana fa haneho ny fahaizan'ny Ny torolàlana CDC amin'ny fotoana mety. Amin'izao fotoana izao, ity misy torolàlana fohy momba ny toerana mafana sasany malaza sy toerana fitsidihan'ny mpitsidika satria nambara ny politika momba ny sarontava vaovao.